Dow အပြာရောင်ချစ်ပ်ဝင်ငွေနှင့်ကြီးထွားမှု၏ခွေးများသည်ဤဈေးကွက်တွင်ထူးခြားမှုရှိသလား။ - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
အဆိုပါ Dow ၏ Durig ရဲ့ Dogs ကို
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 14, 2020 ဇူလိုင်လ 16, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ ဘ‌‌လော့ခ်, စီးပွားရေး, မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်, အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ, အဆိုပါ Dow 2020 ၏ခွေး, S&P 500 ၏ခွေးများ - ၂၀၂၀, အယ်ဒီတာရဲ့ Pick, Fixed ဝင်ငွေခွန်, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ
ရေ ကနေရွေးရန်4ခွေးတွင်လည်းရှိပါတယ်။
10% ကျော်သက်တမ်းကြာရှည်စွာပျမ်းမျှအားဖြင့် COVID 19 စျေးကွက်ပျက်စီးမှုသည်ထူးခြားသည်။ ကပ်ရောဂါဝက်ဝံဈေးကွက်အတွင်း (၂၀၂၀ ၏ပထမသုံးလပတ်) တွင်အမေရိကသည်လုံးဝရပ်တန့်သွားသည်ကိုသိထားသည့်အတိုင်း (၂၃.၂.၂၂%) ကျဆင်းသွားပြီးစံသတ်မှတ်ချက်အများစုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်လေးစားဖွယ်ကျဆင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှစ်စမှယနေ့အထိ။
ကောင်းမွန်သောစျေးကွက်များမှရရှိသောပျမ်းမျှ ၀ င်ငွေရငွေကိုရှာဖွေနေသည့်အမေရိကန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်မကောင်းသောနှင့်ကူးစက်ရောဂါဈေးကွက်များမှခိုင်မာသောနိယာမကာကွယ်မှုကိုရှာဖွေရန်အတွက်ဤသည်မှာအကောင်းဆုံးသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
Dividend Dogs ဆိုတာဘာလဲ။
ခွဲဝေစျေးနှုန်းကျဆင်းမှုကြောင့်မကြာခဏဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသောမြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းအမြတ်ဝေစုကုမ္ပဏီများအားခွဲဝေပေးသော Dividend Dog Portfolios (Durig တွင်ရွေးချယ်ရန်စုစုပေါင်း ၄ ခုရှိသည်) ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ Dow Dividend ခွေး Dow Jones စက်မှုပျှမ်းမျှများထဲမှပိုမိုမြင့်မားသောခွဲဝေမှုကိုရွေးချယ်သည်။ ဤချဉ်းကပ်မှု၏အဓိကနိယာမမှာအမေရိကန်စီးပွားရေးသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်အမေရိကန်စီးပွားရေးလည်ပတ်မှုများနှင့်အတူ (COVID 19 ဟုခေါ်သောကူးစက်ရောဂါကြောင့်အကြီးအကျယ်တိုးပွားလာသည်) သည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသိသိသာသာမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုရိုးရှင်းစွာမျက်နှာသာသို့မဟုတ်သို့ကြွလာဟုခေါ်သည်။
S & P 500 ၏ခွေးများ အချိန်ကျော်ကောင်းစွာဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုမရှိသောအခါမြင့်မားသောအထွက်နှုန်းရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်၎င်းကိုမျက်နှာသာပေးသည့်အခါရောင်းချခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားငွေရှာရန်အလွန်ကောင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအစုစုသည်အဓိကအားဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအပြာချစ်ပ်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့်အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်း၊ မြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းပေးဆောင်ခြင်း၊ Dow စတော့ရှယ်ယာများဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစွာသည်အငြိမ်းစားယူတော့မည်သို့မဟုတ်အငြိမ်းစားယူပြီးဖြစ်သောကြောင့် ၀ င်ငွေမြင့်မားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုအာရုံစိုက်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်လမ်းမပေါ်တွင်သူတို့သည်သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာလူနေမှုဘ ၀ ဖြစ်နိုင်ခြေကိုရှာဖွေနေလျှင်ပင်သူတို့သည်မကြာခဏလေ့ကျင့်ထားသောနေထိုင်မှုပုံစံကိုဆက်လက်ရှင်သန်ရန်ဝင်ငွေပိုမိုလိုအပ်သည်။
Durig မှာဒီ အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ ရေရှည်မဟာဗျူဟာမြောက်ချဉ်းကပ်မှုသည်အလွန်ခက်ခဲသော Covid 19 ရောင်းအားများ၌ပင်ထင်ရှားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသခဲ့သည်။ ဤသည် Durig မှတက်ကြွစွာအလေးချိန်, သုံးလတစ်ကြိမ်ပြန်လည်ချိန်ညှိခြင်းနှင့်ပို။ ပင်ဝင်ငွေစီးတိုးမြှင့်ဖို့ကုန်ကျစရိတ်ကုန်သွယ်ကဆက်ပြောသည်။ ၏အောင်မြင်မှုကြောင့် အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ နှင့်အလားတူ S & P 500 ၏ခွေးများ, Durig နောက်ထပ်နောက်ထပ်နောက်ထပ် Dogs ကိုနှစ်ခုမိတ်ဆက်: The ဥရောပခွဲဝေခွေးများ နှင့် ကနေဒါခွဲဝေခွေး, တူညီတဲ့ခိုင်လုံသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခြေခံမူအများအပြားအပေါ်တည်ဆောက်ပေမယ့်ထူးခြားကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
အောင်မြင်သောအောင်မြင်မှုနှင့်အတူဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဗျူဟာကို အသုံးပြု၍ ယနေ့ထက်မြက်သောကုန်ကျစရိတ်များ၊ ပြန်လည်ထိန်းညှိခြင်းနှင့် Durig E မှတ်တမ်းတင်ခြင်းတို့ဖြင့် Dividend Dogs ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်မည်သည့်အခါကမျှမလွယ်ကူခဲ့ပါ။ Durig တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းချိုသာပြီးနှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများနှင့်အကျိုးအမြတ်များအပေါ်အခွန်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအားသာချက်များကိုပေးသောအစုစုကိုလွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူပါသည်။
ကရွယ်တူချင်း Dow စွမ်းဆောင်ရည်၏ Dogs ကို
Durig's Dow of the Dow သည် Alpha နှင့် Beta တို့တွင်ကောင်းမွန်စွာဖျော်ဖြေခဲ့သည်
အဆိုပါ Dow ကုန်ကျစရိတ်၏ခွေးများ
ရေ ရွေးချယ်ရန် Dividend Aristocrats သုံးခုရှိသည်။ S&P 500, အ ကနေဒါ နှင့် ဥရောပ.
များစွာသော ၀ င်ငွေသည်တိုးတက်မှုသို့မဟုတ် ၀ င်ငွေကိုထောက်ပံ့သည်ဟုဆိုသော်လည်း၊ များစွာသောအ ၀ င်အထွက်များသည်အပြာရောင်ချစ်ပ်မြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းများအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါတစ်ခုမှပင်သုံးနှစ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည်။
Durig's Dow of Dow သည် ၀ င်ငွေတိုးပွားမှုစံချိန်စံညွန်းသာမကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမျိုးမျိုးကွဲပြားမှုနှင့် Covid ၁၉ ကဲ့သို့သောပြissuesနာများကိုရေရှည်ပြproblemsနာများနှင့်အတူထွန်ယက်နိုင်သည့်ကြီးမားသောအမေရိကန်အပြာရောင်ချစ်ပ်ကုမ္ပဏီကြီးများ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်းပေးစွမ်းသည်။
Randy Durig - တည်ထောင်သူ
အဆိုပါ အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ Durig ၏ ၀ င်ငွေဖြေရှင်းနည်းများကိုစုဆောင်းခြင်း၏ပထမဆုံးဖြည့်စွက်ချက်ဖြစ်သည် ပျမ်းမျှအမြတ်အစွန်း 4.24% ကျော်အထွက်နှုန်းနှင့်သုံးလတစ်ကြိမ်ပြန်လည်ချိန်ညှိခြင်းဖြင့်၎င်းသည်အမေရိကန်နိုင်ငံသားများအတွက်ထူးကဲသောအမျိုးမျိုးသောစွမ်းဆောင်ရည်များပေးသည့်အခါ ၀ င်ငွေတိုးရန်စွမ်းရည်ရှိသည်။ အစုစုသည်ထုတ်လုပ်ရန်အလွန်ရှားပါးသောအလားအလာရှိသည် အပြာရောင်ချစ်ပ်အရွယ်ကုမ္ပဏီများနှင့်ဝင်ငွေ၊ အချိန်ပို
ဤထူးခြားချက်သုံးခုသည်ကောင်းမွန်သောနှင့်မကောင်းသောစျေးကွက်များ၊ အစုံအလင်ပါရှိသောမှတ်တမ်းများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည် အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ သူတို့ရဲ့သက်တူရွယ်တူတွေနဲ့ဆိတ်ကွယ်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ။ အဆိုပါ Dow ၏ Durig ရဲ့ Dogs ကို သင်၏ ၀ င်ငွေရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရှိရန်ကူညီရန်ရည်ရွယ်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အထောက်အကူပြုအဖွဲ့နှင့်အလွန်တန်ဖိုးနည်းသောဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Durig ၏ Portfolios မှရွေးချယ်ရန်:
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကသို့မဟုတ် Dog of the Dow အကြောင်းထပ်မံသိရှိလိုပါကဖုန်းဆက်ပါ ရေ at (971) 327-8847သို့မဟုတ် info@durig.com သို့အီးမေးလ်ပို့ပါ.
များသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင် အများပိုင်သတင်း ခွေး ကနေဒါခွေး ဥရောပ၏ခွေးများ အဆိုပါ DOW ၏ခွေးများ S & P ၏ခွေးများ
ရုရှားနှင့်တရုတ်တို့အနေဖြင့်တိုက်ရိုက် Quantum Communication Grid ရှိမည်